Wararka - Immisa ohms ah ayaa ah qiimaha iska caabinta fiilada Qaybta 5E (cat 5e)?
Immisa ohms ah waa qiimaha iska caabinta ee Qaybta 5E (bisad 5e) fiilada?
Iyadoo ku xiran walxaha fiilada shabakada, qiimaha caabbinta waa ka duwan yahay.
1. Xadhkaha isku xirka birta ee naxaasta leh: caabbinta 100 mitir waxay ku saabsan tahay 75-100 ohms.Xadhigan ayaa sidoo kale ah xadhiga ugu jaban suuqa, saamaynta isgaadhsiintuna maaha mid aad u wanaagsan.
2. Xadhkaha shabakadda aluminium ee naxaasta leh: caabbinta mitirka 100 waxay ku saabsan tahay 24-28ohms.Fiilada shabakadda ee noocan ah ayaa si fiican loogu iibiyaa suuqa, waana raqiis, fogaanta iyo isgaadhsiinta ayaa wanaagsan.Laakiin nolosha adeeggu sidaas uma fiicna, sababtoo ah caabbinta oksaydhka oo liidata.
3. Xadhkaha shabakada qalinka ah ee naxaasta leh: Lacagta naxaasta leh waxa kale oo loo yaqaan fiilada shabakada aluminium ee samaynaysa sare.Maaddadu way ka nadiifsan tahay aluminium naxaas-daboolan, iska caabintuna waa qiyaastii 100 mitir iyo 15ohms.Fogaanta isgaarsiineed ayaa ka dheer fiilada aluminiumka ee naxaasta leh.Laakiin cilladaheeda waxay la mid yihiin fiilada shabakadda aluminium ee naxaasta ah, nolosha haddaysan dheerayn, caabbinta oksaydhka liidata.
4. Copper-clad cable network copper, caabbinta fiilada shabakadani maaha mid yar, mitirka 100 qiimaha caabbinta waa qiyaastii 42 ohms, waxqabadka guud ahaan waa wanaagsan yahay, laakiin waa iska caabin xoog leh oo oksaydh ah, nolosha adeeggu aad ayey uga dheer tahay aluminium naxaas ah.
5. Xadhkaha shabakada naxaasta ah ee aan ogsajiin-free: fiilada shabakada naxaasta ah ee oxygen-free waa iska caabbinta ugu yar, 100 mitir iska caabin ah oo ku saabsan 9.5 ohms, siliggani waa waxqabadka ugu fiican ee suuqa.
Waqtiga post: Seb-25-2021